ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Archives - Page2of9- Latest Myanmar News
June 21, 2021 by Latest Myanmar News
ရှူးရှူးရှဲရှဲ အပ်မှိုသုပ် ပြုလုပ်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်းများ အပ်မှို ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ ခရမ်းချဉ်သီး ငရုတ်သီးစိမ်း သံပုရာသီး ဆား အသားမှုန့် (အချိုမှုန့်) သကြား ပုစွန်ခြောက် Soy sauce (အရောင်နီနီလေးလိုချင်ပြီး ပုစွန်ခြောက်မတည့်သူတွေ soy sauce နဲ့ သုပ်လို့လဲရပါတယ်) ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် – ပထမဦးစွာ အပ်မှိုကို ရေဆေး အမြစ်များကို ဖြတ်ပြီး ရေနွေးပူဖြင့် ၃ မိနစ်မှ၅မိနစ် ခန့်ရစိမ်ထား/ပြုတ်ထားပါ။ – ကြက်သွန်ဖြူ ငရုပ်သီးစိမ်းများများ ညက်နေအောင် ထောင်းပါ။ – ခရမ်းချဉ်သီး အနည်းငယ်လှီးပြီး သံပုရာသီးကို စိပ်ထားပါ။ – ကြက်သွန်နီထည့်မယ်ဆိုရင် ပါးပါးလှီးထားပါ (ကြက်သွန်အစိမ်းမကြိုက်လို့ မထည့်ရင်လည်း ရပါတယ်) – အပ်မှိုကို ရေနွေးထဲက ဆယ်ယူပြီး ပန်းကန်ထည့်ပြီး … Read more
အရည်သောက်…..တာလပေါဟင်း ကြက်ရိုးတွေရေဆေး ဆား ဆနွင်း အရသာမှုန့်လေးနယ်ပြီး ဂျင်းထောင်းထည့်ပြီးပြုတ်ထား ဗူးညွန့်တစ်စည်း ၊မျှစ်ဝါနု ၁၀သား ၊ရုံပတီသီး ၁၀တောင့် ၊ မုန်ညင်းဖူး တစ်စည်း ၊ငရုတ်အနီတောင့် ရတောင့် ၊ဆူးပုတ် တစ်စည်း…တိုကိုဆားရည်နဲ့စိမ်ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထားပေးပါ။ ဆန်လက်တစ်ဆုပ်ကိုလှော်ပြီးထောင်းထားနော်။ ဟင်းရည်အိုးဆူလာရင် မျှင်ငပိလက်ဖက်စားဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့် ကြက်သွန်ဖြူနှစ်လုံးထောင်းထည့် ။ကြက်သွန်နီတစ်လုံးလေးစိတ် စိပ်ထည့်ပါ။ ဆန်လှော်မှုန့်ထောင်းထားတာလေးထည့်ပြီးဆူအောင်ထား ပြီးရင်တော့မျှစ်ကို အရင်ထည့်မယ်…. ကျန်တဲ့အသီးအရွက်တွေအုပ်ပြီး ဆား အရသာမှုန့်လေးခပ် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေးဖြူး ဆူးပုတ်ရွက်လေးအုပ်လိုက်ပါ။ ဆန်လှော်မှုန့်နံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့အရမ်းစားကောင်းတဲ့ တာလပေါဟင်းလေးတစ်ပွဲရပါပြီနော်……. yya ကရင်ရိုးရာ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းတစ်မျိုး Zawgyi အရည္ေသာက္…..တာလေပါဟင္း ၾကက္ရိုးေတြေရေဆး ဆား ဆႏြင္း အရသာမွုန္႔ေလးနယ္ၿပီး ဂ်င္းေထာင္းထည့္ၿပီးျပဳတ္ထား ဗူးညြန္႔တစ္စည္း ၊မၽွစ္ဝါႏု ၁၀သား ၊႐ုံပတီသီး ၁၀ေတာင့္ ၊ မုန္ညင္းဖူး တစ္စည္း ၊င႐ုတ္အနီေတာင့္ … Read more
ကျန်းမာရေနဲ့ညီညွှတ်ပြီးအရသာလဲရှိအိမ်တွင်းဒိန်ချဉ်ပြုလုပ်နည်းလေး ဒိန်ချဉ် လုပ်နည်းလေး မေးထားလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ နွားနို့ ၁ ပိသာကို ဆူအောင်ကျိုပါ။ ကျိုတဲ့အခါ ဆူရုံလေးပဲ မထားပါနဲ့။ ကြာကြာလေး ကျိုပါ။ တအားကြီးလည်း မပျစ်ပါစေနဲ့နော်။ ပြီးရင် မီးဖိုပေါ်က ချပြီး အအေးခံပါ။ လုံးဝ အေးသွားတဲ့အထိ မစောင့်ရပါ။ ( နွေးနွေးလေးမှာ အချဉ် ကို ထည့်ရမှာမို့ပါ) လက်ညိုးကိုထည့်ကြည့်လို့အပူခံနိုင်တယ်ဆိုရုံလေးပေါ့။ အချဉ် (ဟင်းခတ်ဇွန်း ၁ ဇွန်း) ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ ပြီးရင် အုပ်ဆောင်းနဲ့အုပ်ပြီး မရွေ့လျားစေဘဲ ၂၄ နာရီ ထားပါ။ အခန်းအပူချိန်မှာပဲ ထားရမှာပါ။ ၂၄ နာရီပြည့်ရင် ဒိန်ချဉ် ဖြစ်ပါပြီ။ သတိပြုရမှာတွေက လေလုံအောင် အိုးကိုပိတ်မထားရပါဘူး။ ခဏခဏလည်း မမွှေရပါဘူး။ အချဉ်ထည့်ချိန်မှာသာ မွှေပေးရတာပါ။ အချဉ်ထည့်ချိန်မှာ … Read more
စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်သော လွယ်လွယ်ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်သော မြေပဲယို ၊ နှမ်းယို ပြုလုပ်နည်း
လွယ်လွယ်ကူကူ Home made မြေပဲယိုနှင့်နှမ်းယိုလုပ်နည်း မြေပဲယိုနှင့်နှမ်းယိုများကို မိမိတို့အိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်မယ်နော်။အရမ်းလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အတွက်လုပ်စားလို့လည်းအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ရှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများ မြေပဲဆံ နို့ဆီဗူး၁ခွက်(သို့)နှမ်းနို့ဆီဗူး၁ခွက် ထန်းညက်၇လုံး၊ကြံသကာ၃ချောင်း(အချိုကြိုက်ပါက ပိုထည့်နိုင်ပါတယ်) ရေဆန်ချိန်ခွက်၁ခွက် ဆားလက်ဖက်စားဇွန်း၁/၄ ပုံ ပြုလုပ်နည်း မြေပဲဆံ(သို့)နှမ်းကို‌လှော်ထားပါ။မြေပဲဆံဆိုအခွံချွတ်ထားပေးပါ။အိုးထဲရေထည့်ပြီးထန်းညက်ကိုညောင်စေးကြအောင်ကြိုပါ။ ထန်းညက်ရည်စေးလာရင်မြေပဲဆံ(သို့)နှမ်းထည့်ပါ။ဗန်းတစ်ချပ်ကိုပဲဆီသုတ်ပြီးမြေပဲ(သို့)နှမ်းကြိုထာတာလောင်းထည့်ပါ။မြေပဲအပေါ်မှ နှမ်းလေးဖြူးပေးလည်းရပါတယ်။ ခဏအအေးခံ ဓားရာပေးပြီးဆက်ပြီးအအေးခံပေးပါမယ်။အေးခဲသွားပြီဆိုဆိုရင်မြေပဲယိုးလေးစားရန်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။ Source&Photo_Credit Zawgyi လြယ္လြယ္ကူကူ Home made ေျမပဲယိုႏွင့္ႏွမ္းယိုလုပ္နည္း ေျမပဲယိုႏွင့္ႏွမ္းယိုမ်ားကို မိမိတို႔အိမ္မွာ လုပ္စားၾကည့္မယ္ေနာ္။အရမ္းလြယ္ကူ႐ိုးရွင္းတဲ့အတြက္လုပ္စားလို႔လည္းအဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္ရွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား ေျမပဲဆံ ႏို႔ဆီဗူး၁ခြက္(သို႔)ႏွမ္းႏို႔ဆီဗူး၁ခြက္ ထန္းညက္၇လုံး၊ႀကံသကာ၃ေခ်ာင္း(အခ်ိဳႀကိဳက္ပါက ပိုထည့္ႏိုင္ပါတယ္) ေရဆန္ခ်ိန္ခြက္၁ခြက္ ဆားလက္ဖက္စားဇြန္း၁/၄ ပုံ ျပဳလုပ္နည္း ေျမပဲဆံ(သို႔)ႏွမ္းကို‌ေလွာ္ထားပါ။ေျမပဲဆံဆိုအခြံခြၽတ္ထားေပးပါ။အိုးထဲေရထည့္ၿပီးထန္းညက္ကိုေညာင္ေစးၾကေအာင္ႀကိဳပါ။ ထန္းညက္ရည္ေစးလာရင္ေျမပဲဆံ(သို႔)ႏွမ္းထည့္ပါ။ဗန္းတစ္ခ်ပ္ကိုပဲဆီသုတ္ၿပီးေျမပဲ(သို႔)ႏွမ္းႀကိဳထာတာေလာင္းထည့္ပါ။ေျမပဲအေပၚမွ ႏွမ္းေလးျဖဴးေပးလည္းရပါတယ္။ ခဏအေအးခံ ဓားရာေပးၿပီးဆက္ၿပီးအေအးခံေပးပါမယ္။ေအးခဲသြားၿပီဆိုဆိုရင္ေျမပဲယိုးေလးစားရန္အသင့္ျဖစ္ပါၿပီ။
Categories ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Tags မြေပဲယို
ထိုင်းစတိုင် ကြာဇံရှုးရှဲချဉ်ငန်စပ်သုပ်” လုပ်နည်း
“ထိုင်းစတိုင် ကြာဇံရှုးရှဲချဉ်ငန်စပ်သုပ်” လုပ်နည်းလေး ကဲ အားလုံးပဲ အရသာရှိရှိလေးတွေ လုပ်စားကြရအောင်နော် အရမ်းကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ ထိုင်းစတိုင် ကြာဇံရှူးရှဲချဉ်ငန်စပ်သုပ်လေး ချဉ်ငန်စပ်စပ်လေးလုပ်ရတာလဲ အရမ်းကိုလွယ်တယ်နော် “ထိုင်းစတိုင် ကြာဇံရှုးရှဲချဉ်ငန်စပ်သုပ်” လုပ်ရန်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ>>> ၁.ယိုးဇယားReadymade အပြာထုတ်၂ထုတ် ၂.CPကြက်ကြောလုံး လိုသလောက်,ဝက်သားပြုတ်အနဲငယ်(ဝက်သားကမထည့်လဲရ) ၃.ပဲပင်ပေါက်,ကြက်သွန်နီ,ဂေါ်ဖီထုတ် အနဲငယ် ၄.ငရုတ်သီးအတောင့်ကြော် (ထမင်းစားဇွန်း၅ဇွန်း) ၅.ကင်းမွန်ငံပြာရည် (ဟင်းခတ်ဇွန်း၃ဇွန်း) ၆.သံပုရာသီး ၃လုံး , ဟင်းချိုမှုန့်လိုသလောက် “ထိုင်းစတိုင် ကြာဇံရှုးရှဲချဉ်ငန်စပ်သုပ်” ပြုလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့် >>> ၁ ပဲပင်ပေါက်,ကြက်သွန်နီ,ဂေါ်ဖီထုတ် အနဲငယ်ကို လှီးထားပါ ၂ CPကြက်ကြောလုံး လိုသလောက်,ဝက်သားပြုတ်အနဲငယ်(ဝက်သားကမထည့်လဲရ) ကြော်ထား,ပြုတ်ထားပါ ၃ ယိုးဇယားReadymade အပြာထုတ်၂ထုတ်ကို ပြုတ်ထားပါ (အရမ်းမပျော့ပါစေနဲ့) ၄ ပဲပင်ပေါက်,ဂေါ်ဖီထုတ် တွေကို ၅မိနစ်လောက် ပြုတ်ထားပေးပါ ၅ သုပ်နည်း>>> ငရုတ်သီးအတောင့်ကြော် … Read more
Categories ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Tags ကြာဇံရှုး
ထမင်းမသိုးစေရန် ချက်ပြုတ်ခြင်း ပူပြင်းသောရာသီမှာ ထမင်းသိုးတတ်ပါတယ်။ ထမင်းမသိုးစေရန် ချက်ပြုတ်နည်းလမ်းကောင်း တချို့ ကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။ ထမင်းအိုးနပ်ခါနီးမှာ ဆားအနည်းငယ် ဖြူးထည့်ပါ။(ထမင်းပေါင်းအိုးနှင့်ချက်ပါက ထမင်းကျက်သည့်အခါ မီးအလင်းရောင်ခလုတ် အလိုအလျောက် ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်၊ ထိုအချိန်မှာ ဆားအနည်းငယ် ဖြူးထည့်ပါ) ထမင်းအိုမချက်ခင် ဆန်ကို (၃) ကြိမ် ရေဆေးပါ။ ဆန်ဆေးရေအရောင် ကြည်လင်သည်အထိဆေးပါ။ ထမင်း လုံးဝကျက်သွားသည့်အခါ ထမင်းပေါ်ကို အဝတ်စတစ်ခု လွှားပြီးမှ ထမင်းအိုးအဖုံးကို ဖုံးအုပ်ပါ။ ထမင်းအိုးတည်နေစဉ် ရေထဲကို ရှာလကာရည် နှစ်စက် ထည့်ပေးပါ။ ဤနည်းက ထမင်းသိုးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် ထမင်းအနံ့နှင့် အရသာ ကိုပို၍လည်းကောင်းစေပါတယ်။ ထမင်းချက်သည့်အခါ ဆီ နှစ်စက်၊ သုံးစက်ခန့် ထည့်ပါ။ ဤနည်းက ထမင်းမသိုးစေသည့်ပြင်၊ ထမင်းအရောင်ကိုလည်း စားချင့်စဖွယ် ဆွဲဆောင်မှု ဖြစ်စေပါတယ်။ … Read more
May 16, 2021 by Latest Myanmar News
ဘိတ်ချဉ်လုပ်နည်း မေးသူများအတွက်ပါ ၁။ ကြက်သွန်ဖြူ ဥတစ်လုံး ၂။ ငရုတ်သီးစိမ်း ၃။ ရှာလကာရည် ၄။ ငံပြာရည် ၅။ အချိုမှုန့် အားလုံးရောပီး စိမ်ထားရုံပါပဲ။ အကြာကြီးလည်း အထားခံပါတယ်။ အချိုးအစားကတော့ ပုံပါအတိုင်းပါပဲ။ အချိုမှုန့်ကတော့ မိမိအကြိုက် အနည်း အများ ထည့်ပါ။ အရည်တွေ မဖိတ်စင်အောင် ကန်တော့လေးနဲ့ ထည့်ပါတယ်။ ကျမက ဘိတ်ချဉ်ဆို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ အဆင်သင့် အမြဲလုပ်ထားပါတယ်။ ထမင်းပေါင်း,ထမင်းကြော်,ကြာဇံကြော်,ကြက်ကင် ဘာပဲလုပ်စားစား ဘိတ်ချဉ်ရှိတော့ အဆင်သင့်စားရုံပါပဲ။ Hot Pot နဲ့ စားရင်တော့ ခုစိမ်ထားတဲ့ ဘိတ်ချဉ်ထဲကို သကြား ထပ်ထည့်ပီး စားပါတယ်။ အရောင်ပါတဲ့ အချဉ်တွေထက် ဘိတ်ချဉ်ကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ကော်ဗူးက ကြာရင် ကော်နံ့ထွက်တတ်တာမို့ … Read more
Categories ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Tags ဘိတ်ချဉ်
#ရေခဲမုန့်လုပ်နည်း အိမ်မှာလုပ်ကြည့်ရအောင်( ဝါသနာ ပါသူတွေအတွက်) ရေခဲမုန့်ကို နွားနို့နဲ့လည်းလုပ်လို့ရသလို နို့မှုန့်နဲ့လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ နွားနို့ဆိုရင် နို့စစ်စစ်နဲ့ပိုကောင်းပါတယ်။ နွားနို့စစ်စစ် ၁ ပိသာကို ဆူပွက်အောင်ကြို ပါ။ နို့မှုန့်ဆိုရင် ဂရမ် ၂၀၀ကို ရေတစ်လီတာဘူးရှိတဲ့ ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေနွေးနဲ့ဖျော်ပါ။ -ကျောက်ကျောမှုန့် စတီးဇွန်း ၁ဇွန်း ၊ ပြောင်းဖူးမှုန့် စတီးဇွန်း ၂ ဇွန်းလောက်ကို ရေနည်းနည်းထည့်ပြီး အရည်ပျစ်ပျစ်ဖျော်ပါ။ ပြီးရင် ဆူပွက်နေတဲ့ နို့အိုးထဲကိုလောင်းထည့်ပါ။ သကြားစတီးဇွန်း ၅ဇွန်းနဲ့ဆားနည်းနည်းထည့်ပါ။ မပြတ်မွှေပေးပြီး ပျစ်လာအောင် ကျို ပါ။ ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ်လာရင် မီးဖိုပေါ်ကချပြီးအအေးခံပါ။ အေးတဲ့အခါ ရေခဲသေတ္တာ အပေါ်ကန့်မှာ ၄နာရီလောက်ထည့်ပြီးအအေးခံပါ ။ ပြီးရင် ရေခဲသေတ္တာထဲကထုတ်ပြီး သစ်သီးမွှေစက် (Blender)ထဲထည့်ပြီးတစ်မိနစ်လောက်မွှေပါ။ တကယ်လို့ ချောကလက်ရေခဲမုန့်လိုချင်ရင် ချောကလက်မှုန့် စတီးဇွန်း … Read more
Categories ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Tags ရေခဲမုန့်
May 15, 2021 by Latest Myanmar News
Categories ဟင္းခ်က္နည္းမ်ား Tags ကြက်ကောက်ညှင်း